ပန်းမာရ်ပြပွဲ(II) Taipei International Flora Expo. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » ပန်းမာရ်ပြပွဲ(II) Taipei International Flora Expo.
ပန်းမာရ်ပြပွဲ(II) Taipei International Flora Expo.
Posted by zoe on Feb 11, 2011 in Events/Fundraise, News, Photography, Travel, World News |6comments
fire works Taipei International Flora Expo zoe ပန်းမာရ်ပြပွဲ
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်ဖွင့် ပွဲ ဗီဒီ ယို ။ ဖွင့်ပွဲကျင်းပချိန် ရာသီဥတု မကောင်း လို့ မီးရှူးမီးပန်း မျက်စိပသာဒ မျှော်မှန်းသလောက် မမြိုင်ဆိုင် မလှပ ကြောင်း ။ ငွေ သာကုန် ပြီး အလဟာတ်သ ဖြစ်သွား ကြောင်း ဝေဖန်ကြသည် ။ ဗီဒီ ယို ကိုကြည့် ပြီး ဆုံး ဖြတ် ကြပါ ။
နောက်ထပ် ပန်း ဓာတ်ပုံ တွေ တင် လိုက် ပါ တယ် ။
နောက်ထပ် ဆက်ရန် ။။
နာနတ်သီးတို့.. ငှက်သိုက်တို့လည်း ပါနေတယ်ပေါ့..။
နှင်းခဲတွေကျတဲ့ရာသီဥတုပိုင်တဲ့… အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ တခုတည်းသောနိုင်ငံဆိုတော့ .. အဲဒါမျိုးပန်းတွေအကုန်..စံနစ်တကျလေ့လာ..မျိုးယူစိုက်မယ်.. နိုင်ငံခြားပြန်ပို့ မယ်ဆိုရင်.. တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ..ငွေရှာအရင်းအမြစ်ကြီးဖြစ်မှာပဲ..။
စိုက်သူ၊ ရောင်းသူ ထုတ်လုပ်သူတွေလည်း အကျိုးနည်းမယ်မထင်ပါဘူးနော..။
zoe ရေ ကျေးဇူးပါ။ နဂါးမောက်သီးနဲ့လိမော်ကလည်း မျက်စိ ပသာဒရှိပြီးစားချင်စရာ ။
အရမ်းလှတဲ့ပန်းခင်းတွေပဲနော် ပြင်ဦးလွင်က ပွဲလုပ်တိုင်းသွားချင်ပေမယ့် တစ်ခါဖူးမှ မရောက်ဖူးသေးပါ။ သွားချင်နေတယ်။
နဂါးမောက်သီး တွေ ဒီမှာ သိပ်တော့ ခေတ်မစားပေမဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ခေတ်စားကြတယ် ဒီနေ့ဘဲ ဗီယမ်နာမ် မှာ နဂါးမောက်သီး တပတ် ကို တန် ၁၀၀၀ တင်ပို့ရပြီး ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရတယ်လို့ သတင်းထဲမှာ ဖတ်ရတယ်။
တကယ်ပါပဲ ဆက်လက် ပို့စ တင်ဖို့ ပိုအားရှိ သွား တယ် ။ အားလုံး အားလုံး ကျေးဇူး ကမ္ဘာ ။…:)
ကျေးဇူးတင်စရာ မလိုပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ် ဆူးက ခင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တတ်တယ် ပျင်းရင် သူများ ကို စ တတ်လို့။ အခု တလော သူများ အတင်းတုတ်တာ ပြန်ကြားမိတယ်။ ဒီရွာမှာ စာမရေးတော့ဘူးတဲ့ ဆူး တို့က လိုက်စလို့တဲ့။ ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူး။ ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင် မောင်နှမ လို သဘောထား စနောက်တတ်တယ်နော်။ စိတ်မဆိုးကြေး